यति छ 'टाईगर जिन्दा है' को दुई दिनको कलेक्शन ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»यति छ ‘टाईगर जिन्दा है’ को दुई दिनको कलेक्शन !
यति छ ‘टाईगर जिन्दा है’ को दुई दिनको कलेक्शन !
By दिपेश बिष्ट on ९ पुष २०७४, आईतवार ०९:३४ हलिवुड/बलिवुड
पुस ९, बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म ‘टाईगर जिन्दा है’ ले बम्पर कलेक्शन गरेको छ । पहिलो दिन ३४ करोड कमाएको फिल्मले दोस्रो दिन ३५ करोड भारु कमाएको छ । यो सँगै फिल्मले दुई दिनमा ७० करोड ४० लाख कमाएको छ ।
आइतवार पनि यो फिल्मले भारतभर ८० प्रतिशत अकुपेन्शी ओगटेको छ । यदि दिउँसो र साँझका शोहरुमा पनि यहि अकुपेन्शी ओगटेमा आज पनि ३५ करोड बढिको कारोबार गर्ने अनुमान छ । आजको कमाईले यो फिल्म सय करोड क्लबमा प्रवेश गर्नेछ ।
भोली क्रिशमसको विदा भएकोले पनि भोलीको कमाई दमदार हुने अनुमान छ । फिल्ममा सलमान र कट्रिना कैफको मुख्य भुमिका छ । कुनै समय रिलेशनसिपमा रहेका उनीहरुको ब्रेकअप भएपछिको यो पहिलो फिल्म हो । यसअघि उनीहरु अभिनित फिल्म ‘एक था टाईगर’ले पनि बम्पर कलेक्शन गरेको थियो । फिल्मल दुई सय ५० करोड बढिको कारोबार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।